TALATA 26 MARTSA 2019
ANDRY RAJOELINA SY NY IEM : “Hampidinina ho amin’ny antsasany ny vidin-jiro”
Fototra iray anisany mampandroso ny firenena ny filaminan’ny angovo sy ny herinaratra, hoy ny Filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. Mampikaikaika ny vahoaka ny fidangan’ny vidim-piainana amin’izao fotoana izao, anisany tafiditra ao anatin’io nahitam-piakarana io ny vidin-jiro. 13 mars 2018
Nampanantenain’ny tompon’andraikitra tany am-boalohany fa ireo orinasa lehibe ihany no voakasik’io fiakarana io kanefa ny mifanohitra amin’izany no zava-misy ankehitriny. Velon-taraina amin’ny fidangan’ny vidin-jiro ny tokantrano maro izay lazain’izy ireo fa tsy mifanaraka amin’ireo fitaovana ampiasaina ao an-trano akory.
Manana vahaolana maharitra, ary vonona ny hitondra vahaolana mahakasika izany ny filoha Andry Rajoelina, eo ihany koa ny tosika avy amin’ny ramatoa vadiny amin’ny alalan’ilay tetikasa fitrandrahana ethanol ho lasa angovo azo havaozina. Nandritra ilay fitsidihana nataony tany Ambilobe no nisantarany ny fampahafantarana izany, toky ihany koa no nomeny ny vahoaka tany an-toerana fa “hatao mirary ho takatry ny rehetra ny vidin’ny herinaratra ary hahena hatrany any amin’ny antsasany ny vidin’izany”, hoy ny filoha mpanorina ny Iem.
Araka ny ambetim-panazavana noentiny dia tafiditra ao anatin’ireo vinan’asa ho fampandrosoana an’i Madagasikara ny mahakasika io angovo sy herinaratra io. Tsy ho an’ny vahoakan’Ambilobe ihany fa fisantarana fotsiny no natao tany. Faritra maro no mbola kasain’ny filoha Andry Rajoelina hotetezina izay tafiditra ao anatin’ny fampahafantarana ny Iem hatrany ka andrandrain’ny rehetra ny fitovizan’ny fampanantenana.
Fotodrafitrasa miantraika amin’ny fiainan’ny vahoaka toy ny hopitaly, kianja ho an’ny tanora no nampanantenainy fa hatsangana any an-toerana. Nambarany fa tsy kabary ambony latabatra fotsiny izany fa tsy maintsy hotanterahiny ao anatin’ny fotoana faran’izay fohy. Raha tsiahivina dia fandresena lehibe ho an’ny vahoakan’Ambilobe ny fandalovany tany an-toerana. Nandritra ny fotoana nivahiniany tao Ambilobe dia nihaino ny fangatahan’ireo mponina sy ny hetahetan’izy ireo ny tenany.
ANDRY RAJOELINA SY NY IEM
2018-03-13 07:25:04 par Solofo Jocelyn RAZAFINDRAKOTO
Mankasitraka feno anao izahay vahoaka malagasy Atoa filoha Andry RAJOELINA ,fa ny IEM natolotrao no namelona indray ny fanantenana ho an’ity firenena malalantsika ity.Ary manome toky fa vonona hifanome tanana aminao hanatanteraka ny IEM
Tsy ho afa-bela i Mahafaly Solonandrasana Olivier FAMPIADIANA TEO ANIVON’NY FIKAMBANANA SILAMO MALAGASY (FSM) (238) 20 mars 2019 Namono ny vady aman-janaky ny mpampiasa azy « AIDE-CHAUFFEUR » VOAROAKA TAMIN’NY ASANY (207) 19 mars 2019 Karohina i Tsilavina, ilay tovolahy nahafaty azy telo mianaka FAMONOANA OLONA TAO TOAMASINA (169) 20 mars 2019 Hetra amina miliara maro tsy voaloana mpandra- haraha pakistaneny FANAFARANA VARY (117) 24 mars 2019 Vehivavy 25 taona maty nisy namono ny 18 marsa lasa teo AMBALAMANASY TOAMASINA (103) 19 mars 2019 Nampiaka-peo ireo mponina LEHIBEN’NY FOKONTANY VOAROHIROHY TAMIN’NY HALATRA LAVANILA (87) 20 mars 2019